Ma Sidanaa U Dambaysay? Go'aan Cusub Oo Ay Juventus Ka Qaadatay Cristiano Ronaldo Oo Muujinaysa Heerka Uu Ka Joogo Kooxdaas - Gool24.Net
Ma Sidanaa U Dambaysay? Go’aan Cusub Oo Ay Juventus Ka Qaadatay Cristiano Ronaldo Oo Muujinaysa Heerka Uu Ka Joogo Kooxdaas
Kooxda Juventus ayaa u muuqata mid go’aan cusub ka qaadatay weeraryahanka kooxdeeda ee Cristiano Ronaldo iyo waliba xaalada uu suuqa kala iibsiga ka taagan yahay.
Sida ay sheegayso warbaahintu, Juventus ayaan Ronaldo intaa wax ka badan u arag mid lama taabtaan ah iyagoo intaas ku daraya inay iska iibin karaan suuqyada soo socda isla markaana ay ku fasixi karaan kaliya 54 Milyan oo Pound.
Wargeyska Sport ayaa sheegaya in kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ay si dhaw ula socoto dhaq-dhaqaaqa iyo xaalada Ronaldo oo ay suurogal tahay inay dalab ka gudbiyaan marka uu soo dhammaado Champions League.
Sida ay warar hore sheegeen, wakiilka caanka ah ee masuulka ka ah Ronaldo ee Jorge Mendes ayaa 35 sano jirkaas saxeexiisa u bandhigayay qaar kamida kooxaha ugu waaweyn Yurub kaddib markii ay Juve Champions League ka hadhay.
Marka laga yimaado inuu horyaalka Serie A kula soo guuleystay Juventus sidoo kalena uu rekoodho dhinaca gool dhalinta ah oo kooxdaas ah soo jabiyay, xilli ciyaareedkii kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa kusoo dhammaaday qaab niyad jab ah.
Guuldarrooyin kasoo gaadhay labadii Cup Final ee Suppercoppa Italiana iyo Coppa Italia ayay soo raacday guuldarro xanuun badan oo ay wareega 16-ka ugaga hadheen ChampionsLeague.
Kaddib markii ay Lyon ka reebtay Champions League, Juve ayaa ugu horreynba deg deg shaqadii uga caydhisay tababare Maurizio Sarri iyadoo lagu bedelay Andrea Pirlo oo aan wax khibrad ah lahayn.
Ronaldo ayaa saxeexiisa miiska loo saaray PSG iyadoo loo bandhigay fursada uu Yurub kula qabsan karo xiddigo ay kamid yihiin Neymar JR iyo Kylian Mbappe.
Sidoo kale khabiirka suuqa kala iibsiga ee ree Spain ee Guillem Balague ayaa sheegay inay jirto fursad uu si lama filaan ah ugu biiri karo Barcelona.